Amnesty International: Vana Vakawanda Vari Kufa kuHopley Farm
Sangano reAmnesty International riri kukuridzira hurumende yeZimbabwe kuti iongorore kufa kwevana vachangozvarwa papurazi reHopley muHarare, apo pakagariswa vanhu nehurumende mushure mekuvaputsira dzimba dzavo pasi pe Operation Murambatsvina makore mashanu apfuura.
Vachitaura pakuparurwa kwegwaro rakaonyorwa neAmnesty International mushure mekuita ongororo papurazi iri muna Chivabvu naChikumi gore rino, mumwe mushandi musangano iri kuBritain akaita ongororo iyi, VaSimeon Mawanza, vati vana vakawanda vari kufa vachangozvarwa nekuda kwekushaya hutano hwakanaka.
Vati ongororo yavakaita yakaratidza kuti vana makumi mashanu nemumwe vakafa vachangozvara kubva muna Ndira kusvika muna Chivabvu vakati vana vakafa vanogona kunge vachidarika huwandu uhu, sezvo vachifira mudzimba pamwe nekuvigwa vasina kumboenda kuzvipatara.
VaMawanza vanoti gwaro ravo rinonzi “No Chance to Live : Newborn Deaths at Hopley Settlement”, uye rinoratidza kuti madzimai epaHopley anosunungukira mudzimba pasina vana mukoti kana vana nyamukuta.
Rinotiwo kunyange hazvo madzimai aya akada kuenda kuchipatara, haana mari uye mamwe acho akavaudza kuti vana vazhinji vari kufa vanogona kurarama kana vakaberekerwa muzvipatara.
VaMawanza vati chimwe chinonyanyonetsa paHopley ndechekuti vagari vepo havana chekubata uye kunyange vakada kuita zvekutengesa kuti vawane chouviri, vanogara vachisungwa pamwe nekushungurudzwa nemapurisa nevashandi vekanzuru yeharare.
Mumwe mudzimai anogara paHopely uyo asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti paHopley pane nhamo tema uye hapana kana rubatsiro rwavari kuwana kubva kuhurumende kana kukanzuru yeguta reHarare.
VaMawanza vati kunyange hazvo chinangwa chehurumende chaive chekuti vanhu vagare zvakanaka paHopely pasi pechirongwa cheOperation Garikayi, hapana kugarika papurazi iri uye panenge pasina chido chekuti vagari vepaHopley vagariswe zviri nani.
Gwaro iri rasvitswa kumutungamiriri wenyika, VaRobert Mugabe, mutungamiriri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, pamwe nemakurukota ehurumende.
PaHopley pane vanhu vanodarika zviuru zvishanu uye vamwe vevanhu mazana manomwe ezviuru vakasara vasina dzimba mushure mekupwanyirwa dzimba dzavo nehurumende panguva yemurambatsvina muna 2005.
Amnesty International inoti kana hurumende isingakwanise kubatsira vanhu ava, inofanira kukoka masangano ane mari kuti abatsire vanhu ava.